”Dowladdu waa ”KALI TALIS” – Siyaasadda Talyaaniga ee tan Soomaalida u eg oo kasii dareeysa xaaladda coronavirus ee dalkaa ku dhuftay! (Fadlan akhri) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Dowladdu waa ”KALI TALIS” – Siyaasadda Talyaaniga ee tan Soomaalida u eg...
”Dowladdu waa ”KALI TALIS” – Siyaasadda Talyaaniga ee tan Soomaalida u eg oo kasii dareeysa xaaladda coronavirus ee dalkaa ku dhuftay! (Fadlan akhri)
(Roma) 22 Maarso 2020 – Cudurka Coronavirus ayaa fara ba’an ku haya Talyaaniga oo haatan maraya 53578 kiis, halka ay geeridu mareeyso 4825, kuwaasoo 793 ka tirsani ay shalay oo qura xijaabteen.
RW Giuseppe Conte ayaa iminka soo jeediyey tillaabooyin kale oo dheeraad ah sida in la xiro wax soo saarrada, wershadaha, adeegyada iyo howlaha aan aadka daruuriga u ahayn ilaa Abriil 3, jeer ay cudurka la tacaali la’yihiin in ka badan 7,000 oo dhakhtar oo dalkaa u dhashay ama ku sugan, waxaa sidoo kale sii kordhaysa geerida Spain, Germany iyo United Kingdom.
Yeelkeede, tiiyoo ay arrintu ilaa heerkaa garaab tahay, misna waxaa muuqata inaysan dadka Talyaanigu weli u bislayn tillaabooyinka lagu xakamaynayo caabuqa, waxaana Dowladda Talyaaniga ”kali talis” ku tilmaantay Giorgia Meloni oo ah hoggaamiyaha Xisbiga muxaafidka ah ee Walaalaha Talyaaniga (Fratelli d’Italia) oo sidoo kale weriye ahaan jirtey.
”Wararka kasoo baxaya Dowladda oo leh qaababkii nidaamyada kali taliska ee loo adeegsanayo xaaladda degdegta ah ee caabuqa corona looma dulqaadan karo,” ayay ku bilowday Guddoomiyaha Fratelli d’Italia.
”Baajinta iyo dib u dhacyada joogtada ah ee lagu soo qorayo bogga gaarka ah ee Giuseppe Conte, sida inuusan Talyaanigu hay’ado, TV iyo saxaafad lahayn, waxay kaga sii daraysaa xaaladda amaan xumo, welwelka, cabsida iyo is fahmi waaga aysan Talyaanigu ogayn wixii ay berri yeelayaan. Waxaan lama xamili karo hadda kaddib, waxaan rabnaa daacadnimo iyo wax kala cad,” ayay raacisay.
MA DAREENTAY INAAN LEENNAHAY ASTAAMAHAN JIKAARIGA AH?
Meloni ayaa iska indha tireeysa in lagu jiro xaalad deg deg ah, taasoo ka dhigan inaysan wax kasta u shaqayn karin sidii caadiga ahayd, waxaa kale oo aan dhaqankeeda iyo lahjadeeda ka dhadhamin karnaa halka ay kasoo askuntay mucaaradadda aan moowduuciga ahayn ee siyaasadda Soomaalida.
Dad badan ayaa fahamsan in sababta uu cudurku sida ba’an ugu faafayo Talyaaniga ay koow ka tahay iyaga oo aan raacaynin tilmaamaha, waxaana la saadiyey in haddii uu lacalla cudurku Somalia ka dillaaco, Ilaahay hannaga hayee, uu halis badan keeni doono, maadaama aysan Soomaalidu inta badan nidaamka raacin sida Talyaaniga.
Previous articleDHAFAR DHUNSAN: Dhaqan xumo baahsan oo kasoo korortay magaalada Muqdisho
Next articleMadaxwaynihii Real Madrid oo u dhintay caabuqa coronavirus